Maxay Markhaatiyaasha Yehowah Kulammada si Wanaagsan ugu Labbistaan?
Maxaan Kulammadeenna si Wanaagsan ugu Labbisanaa?
Sawirrada buuggan maad ka aragtay inay Markhaatiyaasha Yehowah si fiican u labbisan yihiin markay kulammadooda joogaan? Maxaynu u daneynaa labbiskeenna iyo sidaan u eegnahay?
Sidaan u ixtiraamno Ilaahayaga. Waa run inuusan Ilaahay muuqeenna keliya eegin. (1 Samuuʼeel 16:7) Hase ahaatee markaan caabudaaddiisa iskugu imaano waxaan aad u rabnaa inaan isaga iyo kuwa nala caabudaba xushmeyno. Haddii aan xaakin maxkamadda jooga hor istaagno labbiskeenna waan ka taxaddari lahayn darajadiisa awgeed. Sidoo kale markaan kulammada aadno muuqashadeenna waxay muujisaa xushmadda aan u qabno ‘dunida oo dhan Xaakinkeeda’ Ilaahay Yehowah iyo meesha aan ku caabudno.—Bilowgii 18:25.
Siday tacliimaha aan ku nool nahay u muuqdaan. Kitaabka Quduuska ah Kirishtaanka wuxuu baraa inay sidii qof “xishoonaya oo digtoon” u labbistaan. (1 Timoteyos 2:9, 10) Si “xishood leh” in loo labbisto waxaa laga wadaa in layska ilaaliyo dhar sababa inay dadku ina fiiriyaan sida dharka faanka badan, damaca kiciya ama dharka jidhka tusa. Digtoonaanshana waxay ina siisaa caqliga aan ku dooranno dhar xaddhaaf ahayn, qurux badan oona qaabdarnayn. Qaynuunnadan waxay ina siiyaan xorriyad uu qof walba dooqiisa ku doorto. Muuqeenna iyo dooqeenna fiican eray la’aan bay ‘Ilaaha Badbaadiyeheenna ah iyo cilmigiisa ammaan ugu soo jiidaan.’ (Tiitos 2:10; 1 Butros 2:12) Labbiskeenna wanaagsan dadka siday u arkaan caabudaadda Yehowah buu beddeli karaa.
Dharkaad xiran tahay inay kaa celiyaan aadidda Hoolka Boqortooyada ma aha. Dharkeenna u ma baahna inay ahaadaan kuwo qaali ah ama yaab badan siday u ahaadaan kuwo habboon, sharaf leh oo nadiif ah.
Muhimmaddee bay leedahay sidaan u labbisan nahay markaan Ilaahay caabudayno?
Labbiskeenna iyo muuqashadeenna Kitaabka Quduuska ah tilmaantee buu inaga siiyaa?
Wadaag Wadaag Maxaan Kulammadeenna si Wanaagsan ugu Labbisanaa?